Yakanakisa CNC Kaviri Column Vertical Lathe Mugadziri uye Fekitori | Gadziridza
1. Iyi nhevedzano yezvigadzirwa inotora modular dhizaini, yekusarudzika basa. Izvo zvigadzirwa zvakakura uye zvakavimbika.
2. Chimbo chakakodzera chekuzorora ndeye NC chishandiso chekuzorora, uye chekuruboshwe chishandiso zororo zvakajairika chishandiso zororo.
3. Iyo CNC system ndeye Nokia 802DSL (mushandisi anogona kudoma imwe system).
4. 100% mashandiro echinyorwa, ari nyore uye anoshanda.
5.Iyo tafura inoshanda inotora ina-giya michina + yakakwira simba DC mota isina kutsika kumhanyisa mirau (ac frequency kutendeuka ndeyesarudzo), ichiziva hombe torque kutenderera, ine inogara tambo kumhanya kutendeuka kugona.
6. Kukwirira kwemhando yepamusoro kunorapwa nekukwegura kwemafuta.
7.Iye gwara njanji yemuchinjikwa danda inogadziriswa ne super odhiyo kudzima, uye gwara njanji yemuchinjikwa danda ndeyeye roll roll slip composite mhando. Iyo yekumira chishandiso mubati ndeye yemakona gondohwe kuti uwane inorema kucheka.
8. Muchinjikwa danda rinotungamira njanji, ram gadhi njanji njanji, ikholamu giraidhi njanji uchishandisa otomatiki lubrication pombi nguva yakawanda kuwanda otomatiki lubrication.
9. Iyo bhora sikuru inotora nanjing tekinoroji P3 yakakwira chaiyo bhora sikuruu, iyo sikuru inotsigirwa nemabheya ekunze.
10. Tafura inoshanda inoshandisa hydrostatic gwara njanji uye synchronous shunt mota kuyambuka-kuyerera mafuta kupa, kutakura 16-20 matani.
11. Independent yemagetsi kabati yemhepo kutonhodza firiji, uchishandisa mhando yepamusoro yemagetsi zvigadzirwa zvemagetsi, kuvimbika kwakanyanya.
12. Independent hydraulic chiteshi, zviri nyore kugadzirisa uye kugadzirisa.
13. Precision kuuraya JB / T9934.1-1999 CNC yakamira lathe chaiyo bvunzo, JB / T9934.2-1999 CNC yakamira lathe technical mamiriro.
14. Yakakwira chaiyo yekuparadzira giya (giredhi 6) uye yakakwira chaiyo yekukwira bevel giya (giredhi 6), yakaderera ruzha, kukwirira kutenderera kunyatso.
15.Fully yakazvimirira yekutsvaga uye kusimudzira, kugadzira, kuisa, kutumira, kurovedza uye mushure-kutengesa sevhisi zvese zvinopedzwa nekambani zvakazvimiririra.
Pashure: CNC Imwe Column Vertical Lathe
Zvadaro: TOUR Drilling Machine
CNC Kaviri Column Vertical Lathe Machine
Max kucheka dhayamita ye workpiece
Kukwirira kweMax chebasa
Max uremu hwebasa
Workbench kumhanya renji
0.5 ~ 40
0.32 ~ 32
Workbench yekumhanyisa akateedzana
magiya maviri hapana danho
Kaviri Column Vertical Machining Center
Vertical Kaviri Column Inoshandura Lathe
Vertical Imwe Column Inoshandura Lathe
VDL Series Lineaner Mugwagwa CNC Vertical Machi ...